Kedu ihe bụ nchọpụta pụrụ iche? - Pụrụ Ịchọta
Home » Kedu ihe onwunwe a pụrụ iche?
Ị Na - achọ Ezigbo Ụlọ?
Naanị ịmara ya n’ebe ahụ ma ị ga-ama ya mgbe ị hụrụ ya.
Amaara m na nke ahụ bụ ahụmịhe m dịka onye na-azụ ụlọ. Enweghị m ike ịkọwa ihe m ga-azụta, n'ihi na ahụbeghị m ya, mana amaara m nke ọma na achọrọ m ihe pụrụ iche. Anọ m na-achọ ihe dị iche - ihe megidere nhazi ọkwa.
Icheta nkụda mmụọ m bụ ihe kpaliri m ilekwasị anya n'inyere ndị mmadụ aka ịchọta "Njirimara nke Pụrụ Iche Njirimara Maka Ndị Na-ahọrọ Ihe Na-emekarị ”, mgbe m meghere ụlọ ọrụ ụlọ m na 1995.
Ngwongwo Nchọta Pụrụ Iche na-agbaghara nhazi ọkwa.
Ọ gaghị adị mkpa
Ọ nwere ike ịdị mma maka ọnọdụ dị mma
Ọ dị obere ma ọ bụ siri ike ịchọta
O nwere ike ile anya ya
Ọ na-enwekarị nhazi ime ihe pụrụ iche
O nwere ike ịbụ ihe pụrụ iche, naanị n'ihi ọnọdụ ya ma ọ bụ echiche ya
O nwere ike ịbụ ebe obibi ochie, ụlọ ngbo ala ma ọ bụ ụlọ ahịa ndị na-anọ n'ọhịa
Ngwongwo obula m nwere abụrụla ihe Mpụtara Pụrụ Iche, site n’ọnụ ụzọ nke okwute nke na-ele Osimiri Hudson na Croton-on-Hudson, New York, n’ebe a na-ereba ụlọ na Hendersonville, NC, ruo n’ụlọ nwere karama nwere agba dị na mgbidi. .
Ọ bụrụ na ị na-achọ nchọta pụrụ iche ma ọ bụ na ị dị njikere inyefe ọhụụ gị pụrụ iche n’aka onye nwe ọhụụ nke ga-eji ya kpọrọ ihe dịka ị mere, biko esi na aka. Anyị ga-achọ inyere aka.